Vula Umnqweno yakho HTC simahla! | I-Androidsis
el_uliulius | | nokuVavanyelwa, Tutorials
Amakhwenkwe Abaphuhlisi beXDA sihambile kwaye siphumelele into eluncedo ukuze sikwazi khulula yethu HTC Desire ekhaya, ubunzima obuncinci kunye mahala Umncedisi uyizamile, kwaye ngaphandle kwento yokuba izihlandlo ezihlanu zokuqala khange ayikhulule, isihlandlo sesithandathu yayiyinto ethandekayo. Amanyathelo ekufuneka elandelwe ngala:
Siya ku Iposti yeXDA y silanda imifanekiso yecd abasibonisayo kumagqabantshintshi okuqala.
Rekhoda umfanekiso okwiCD. Ndifundile kubasebenzisi abasebenzisa VMWare okanye ibhokisi eyiyo ukuqhuba i-ISO. Uninzi lube neengxaki kuqhagamshelo lwe-USB kwisiphelo sendlela. Ukuba uyakwazi ukuyicwangcisa, qhubeka.
Singenisa iCD kwikhompyuter yethu, kwaye siqala (Ukuba uyenza kumatshini obonakalayo, kuya kufuneka uyiqwalasele ukuqala kwi-ISO).
Silinde ikhompyuter ukuba isibuze ukuba siqhagamshele ifowuni nge-USB. Xa isenzeka, umnqweno wethu uya kuba kwimo IHBOOTOko kukuthi, ngokucinezela iqhosha le-Vol kunye neqhosha laMandla ngaxeshanye.
Sidibanisa kwaye sijonga oko kubeka kwikhompyutha yethu. Zombini ziya kuqala kwakhona xa umsebenzi ugqityiwe.
Kubalulekile ukuba ne- IHBOOT 0.93.1000 kunye nerediyo 5.14.05.17 ezizezona ziqinisekisa ukusebenza kwenkqubo (ndinazo zombini iimfuno kwaye andibanga nazo naziphi na iziganeko ezingalindelekanga). Ngokubhekisele ekubeni Umsuka kwaye S-Off andifundanga enye yezi mfuno naphina, nangona nanini na xa kusenziwa lo msebenzi, zombini ziyacetyiswa, kuba, ukuba kukho ingxaki, kulula ukubuyisela i-terminal.
Kulo Iposti yeXDA kunye nguHTCManía baxela iibugs ukwenza isixhobo sikhuseleke kwaye sithembeke. Ewe kuyacetyiswa ukuvavanya i-terminal emva kwayo yonke inkqubo, ukuqinisekisa ukuba khange kubekho zingxaki. Ngaphandle kokuthetha ukuba wonke umntu unoxanduva lwesiphelo sabo kunye nekhompyuter yabo, kwaye abadali abanoxanduva lokungasebenzi kakuhle.
Ndikushiya nevidiyo yamakhwenkwe e IHTCMania nayo yonke inkqubo.
Ibonwe kwi: XDA
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » nokuVavanyelwa » Vula Umnqweno yakho HTC simahla!
Uvavanywe ngempumelelo !!!
Ndiyabulela kakhulu!! Kwafuneka ndiye kwiforum ye-htc mania kuba ikhonkco le-XDA laliphantsi.
Phendula kwi patacolas
xolela ukungazi ,, kodwa izolo ndinike i-wank ndaza ndatshiza ubisi kwiscreen, imbi lonto, yomile kwaye ndizamile ukuyicoca ngayo yonke into kwaye akukho ndlela ndinokuyenza?
Andinayo le nguqulo ye-HBoot kwaye yandisebenzela okokuqala.
Ngaba iyasebenza kwi-nexus yevodafone?
Molo, enkosi ngokunika ingxelo yeendaba, kodwa ngaphandle kokukhubekisa, ndicinga ukuba kuya kufuneka ufunde izinto ngcono ..
Ndicaphula kumbhalo wokuqala we-XDA kwiforum:
«Insiza ayifuni zingcambu okanye icinywe kwaye kufuneka isebenze nakweyiphi na i-hboot kunye nenguqulelo yerediyo. (kuvavanyiwe ukuza kuthi ga ngoku nge-HBOOT ukuya kuthi ga kwi-0.93.1000 kunye neRADIO ukuya kuthi ga kwi-5.14.05.17). »
"Isicelo asifuni zingcambu okanye s-off kwaye kufuneka sisebenze ngayo nayiphi na inguqu ye-hboot kunye nerediyo (kuvavanyiwe ukuza kuthi ga ngoku nge-HBOOT ukuya kuthi ga kwi-0.93.1000 kunye nerediyo ukuya kuthi ga kwi-5.14.05.17"
Ke abantu abanqwenela nge-HBOOT kunye nerediyo yeenguqulelo zangaphambili kwithiyori kufuneka babenakho ukuvula iselfowuni yabo besebenzisa le nkqubo.
Ndizofika kuyo ngoku. Ndikuxelela ukuba isebenze.
Isebenze ngokugqibeleleyo kum! Ndiwuyekile umnqweno wam okwemizuzu emi-5… .. simahla!
Kufuneka kuthiwe kwiwebhusayithi ukuba isebenze nayiphi na i-hboot kunye nayiphi na inguqulelo yerediyo, kwaye awudingi ukuba yingcambu yokusebenzisa esi sicelo.
Ndizamile ukuyivula nge-IMEI kodwa bahlala bendixelela ukuba abanakufumana khowudi yeyunithi ethile.
Ndithi kuphela… Enkosi! Enkosi! Enkosi!
Ndikope ifayile kwi-cd kwaye ndifumana ifolda ethi buti kodwa ayindiqali,
Ndine windows xp, andazi ukuba ingxaki iphi.
Phendula u ngaphezulu
Ewe kufuneka uqale ikhompyuter nge-cd ngaphakathi. Ukuba ayiqali kwi-cd, kuya kufuneka uguqule i-bios
Ndinomnqweno we-HTC yi-movistar kodwa ndibeka ikhadi levodafone kunye neWhatsApp ukuba iyasebenza kodwa andikwazi ukwenza okanye ukufumana iifowuni, ndizamile ukwenza le nto indixelela yona ngasentla, kodwa ndiyifaka iCD kwiPC yam kwaye iPC igcina isikrini esimnyama kwaye emva kwethutyana siqala ngesiqhelo
Isebenzile kum emva kokuzama amatyeli aliqela. Kukhulu, enkosi ngemiyalelo.
Kodwa kwelinye icala, uqhagamshelo lwe-3G alusebenzi kum ... kwaye andazi ukuba kungenxa yoku ... kuba ndivavanye i-sim yam, kwenye ifowuni, kwaye ukuba isebenza ngokuchanekileyo. Ndichukumisile ukucwangciswa, ukukhetha opharetha kwakhona, kodwa akukho nto konke konke.Kwenzekile kuye nawuphi na kuni? Nasiphi na isiphakamiso?
Unxibelelwano lwe3G yidatha? Ukuba yidatha, yiya kuseto-> uqhagamshelo ngaphandle kwamacingo-> inethiwekhi yeselfowuni kwaye uqinisekise ukuba yonke into ilungile. Idatha yenziwe kwaye i-APN yeyomsebenzisi wakho. Ukuba uthetha ukuthini yi-3G, qinisekisa ukuba "sebenzisa kuphela ii-network ze-2G" ukhetho lukhubazekile
Ndiyikhuphe ngolu hlobo kwaye ndinedatha kwinkampani ebeka iSIM kuzo zombini i-HSPA kunye ne-3G
UVicente Alcoba sitsho
Umsebenzi ogqwesileyo, kunye nevidiyo nayo yonke into echazwe kakuhle, enkosi kakhulu ngayo yonke into, andinakuthetha, ndikhawuleza kakhulu kwaye kulula kakhulu
Phendula uVicente Alcoba
Enkosi el_iulius, inene i-APN ihleli ihleliwe.
Nditsalele umnxeba iVodafone 22155 kule meko, kwaye kwimizuzu embalwa bandixelele ukuba ndiyilungiselele njani. (Ixabiso lomnxeba ngaphandle kobude be-0,50 yeesenti, ukuba unomdla)
Molo, iwaranti ilahlekile? Nditsho njalo ukuba kukho into eyenzekayo kwixa elizayo, kwaye iminyaka yam emi-2 indigubungele
Enkosi kakhulu ngenkcazo-sele ndilahle ithemba-ngelaxesha linye # 11 - kodwa i-hboot 0.93.0001 ivuliwe- unomathotholo 5.11.05.27- Ngaba unokukhuphela iinkqubo zekhampasi zale mobile? Umbuliso .
Molo, ndinomnqweno wam we-htc, kwaye ndingathanda ukwazi ukuba ngaba ndibeka nawuphi na umngcipheko ngokuwukhupha ngale ndlela: Oko kukuthi, kwiphepha le-xda lithi ukuba zii-cdms ifowuni ayikukhuthazi ukuyenza kuba inakho kubangela umonakalo ongenakulungiswa.
ifowuni yam yile
Idilesi ye-Adroid 2.2
kwaye andazi ukuba ndiyazi njani i-apn kunye ne-hbook okanye unomathotholo ... yenziwa njani ... uxolo kodwa ndingumbuliso ka newbie hehe
I-Google Talk iyekile ukundisebenzela emva kokuyenza. Ingxaki kukuba sisicelo se-kernel, ke ngoku andazi ukuba ndingayibuyisela njani, okanye ndiyibuyisele kwakhona, okanye ndiyifumane kwakhona: -S
Ngaba uyaphawula naluphi na uphuculo, ngokulikhulula? Ndiyathetha, ingaba ihamba ngokukhawuleza, okanye ngaba kukho naluphi na uphuculo olubonakalayo? Ngaphandle kokukwazi ukubeka nayiphi na i-siml.
Ndiyabulela kakhulu ngokuzisa umnqweno we-htc namhlanje kwaye sele ndiyikhuphele enkosi kuwe = D
Isebenze okokuqala kwaye lixesha lokuqala ndithatha i-htc: P.
Ndisuse isono kwisiphelo sendlela ?????? enkosi mfondini
Kwi-Desire HD iyasebenza okanye ngaba ikhethekile kuMnqweno?
Ngaba umntu unokubeka ikhonkco kwisithuba esichaphazelekayo, okanye ikhonkco lokukhuphela imifanekiso? Kube lixesha kwaye andifumani sithuba kuthethwe ngaso ...
Ngaba umntu unokubeka ikhonkco kwisithuba esichaphazelekayo okanye ikhonkco lokukhuphela umfanekiso? Sele ndilithuba ndingayifumani le post kuthethwa ngayo.
Ngaba ufuna ukwazi ukuba inokusetyenziswa nomnqweno weVodafone HD?
Enkosi kakhulu kwangaphambili ...
uncedooooooo Ndidinga uncedo
Sele ndiwurekhodile umfanekiso kwi-usb kwaye ndiyibuyisile ikhompyuter kwaye ayenzi na de na, oko kukuthi, ukuba ndikwi parlour eh!
ekhaya ndinencwadi yeAiris kwaye andazi nokuba uzakundivumela ndiyenze, incinci kakhulu
ukuba umntu angandixelela ukuba kufuneka ndenze into ethile xa ikhompyuter iqala kwaye ifaka isoftware yayo
PS ndiyaxolisa ukuba ndinje ngale micimbi !!
Kodwa yintoni ukusetyenziswa kokukhulula ifowuni? ukubeka i-SIM kuyo nayiphi na inkampani kwaye yeyiphi enye into? ukuyithengisa ngexabiso eliphezulu? XD
Ngaba umntu unokundixelela ukuba usebenza umlilo wasendle?
Phendula ku zauken
Yintoni ekufuneka yenziwe ukuba iphuculwe? ndayiqhekeza kwaye andiqapheli nto
Ndinomnqweno wevodafone z nefroyo, ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba uyasebenza?
I-100% isebenza kumnqweno wam !!!!
Ndifumene umnqweno we-htc kwaye uvinjiwe, oku kukhutshwa kusetyenziselwa ukuthintela i
Ngaba iluncedo ukuba yenziwe ngomatshini obonakalayo? kuba khange ndikwazi ukuyenza ngale ndlela!
I-HBOOT 0.93.0001 sitsho
Ewe, ndithatha ulwazi ukusuka apha naphaya, ndangena kwi-hboot
kwaye ndine-HBOOT 0.93.0001 endaweni ye-HBOOT 0.93.1000
Ukungena, ISIMLOCK savela esiphelweni sayo yonke into, sihamba ngamaqhosha evolumu,
Ndifikile kwaye ndiyikhethile ngesitshixo sokucima, kwaye umbuzo uphume (ngesiNgesi esicacileyo)
ufuna ukuvula i-sim? ewe cofa iqhosha levolumu, ndiyinike kwaye iselfowuni yaqalwa kwakhona.
Ngaphandle kokuyiqonda, ndiyenze nge-orange sim ngaphakathi, yaqala kwakhona kwaye yafaka ipini yeorenji
ndiye ndacima iselfowuni ndabeka ivodafone sim, ndafaka iphini yevodafone ndabeka:
xa ungena kwi-sim entsha, ii-wallpapers kunye noseto ziya kutshintshwa ... andazi enye into .... Ewe ndathi ewe, ndibiza enye iselfowuni kwaye iyasebenza, nekhadi levodafone.
Khange ndixhume iselfowuni kwi-pc, okanye nantoni na, konke okuvela kwiselfowuni.
Ndicinga ukuba iselfowuni yam iya kuba nohlobo olwahlukileyo kwaye ndiphumelele,
kuba oku kubonakala enkwenkweni kwaye akufani nokwam
Ewe ndiyathemba ukuba unethamsanqa elifanayo nam
Phendula HBOOT 0.93.0001
Ndiyenzile into oyithethayo malunga ne-hboot kwaye oku kulandelayo kuyavela:
Fat32 init kulungile
vula ifayile ye-MCCMNC isilele
vula ifayile ye-CID
Inkqubo yenziwe, ukuqala kwakhona isixhobo?
Ndicinga ukuba inezinye izithintelo, akunjalo? Kuba umsebenzi awuhambanga kakuhle kum.
Unethamsanqa kakhulu ...: _ (mna, hayi.
yile nto iphume kum, iifayile ezi-2 ziyasilela (iifayile zisilele)
kodwa nangoku ndathi ewe
Ndiyenzile ngekhadi leorenji, (kuba iselfowuni yayi-orenji)
emva koko cima kwaye uqhubeke nekhadi levodafone.
Zama ukubona, xa unako kwaye undixelele,
ithamsanqa, masiwele iminwe yethu .. ..
Into efanayo iyenzeka kum njengeGambri ngaphandle kokuba ne-HBOOT efanayo ne-HBOOT0.93.0001, kuya kufuneka sizame enye indlela.
Ndiwuhlangule umnqweno wam kwaye ndigqibelele ngaphandle kokuba awundiniki inethiwekhi ye-intanethi, umntu othile angenza inqaku
Uyikhulule njani? ngendlela efanayo nam, okanye njani ??
Ndingathanda ukwazi ukuba iyasebenza kwi-htc umnqweno we-HD .A9191.
Kwaye leyo yi-0.93.1000 HBOOT.
kwaye ke unomathotholo 5.14.05.17
kwaye ke i-Root kunye ne-S-Off no.
Okwangoku ndizamile nje kwi-HTC Desiree nonomathotholo olandelayo kunye neHBOOT kunye neFUCIONAAA !!!!
I-Teix ungandithumela inyathelo ngenyathelo uyikhuphe njani kuba andikwazi kwaye ndinamaxabiso afanayo nawe kwi-hboot radio
U-OLA UXOLELA NGOKUQONDA xD kodwa ndinengxaki, kufuneka ndivule njani i-hboot? Yintoni le ndinayo? Ukhuphele oku kwiselfowuni okanye njani?
Kulungile ndifuna ukwazi ukuba iyasebenza ne-HTC DESIRE S kwaye uthethelele ukungazi kodwa iselfowuni eyahlukileyo kunale
Ibhokisi yebhokisi yetrayi sitsho
Ndicinga ukuba ndiye kodwa xa ndibeka ipini ithi: network ivaliwe kwaye indibuza ipuk kwaye andinayo. Ndingenza ntoni?
Phendula kwi- Truxy_beatbox
Ndizamile nje kwaye isebenza kakuhle kum. Inye kuphela into endicaphukisayo, xa ndibeka isim evela komnye umsebenzisi ngaphandle kwale bendinayo ngaphambili (iorenji) kubonakala kum ukuba ndidityanisiwe nokuzula. Andazi ukuba oku kuqhelekile, okanye ngaba kukho ingxaki
ULaura Mhle sitsho
Ndingathanda ukwazi into enye: ukuba ukukhutshwa akuphumelelanga, ngaba kuya kuvalwa?
I-PS: Olu khululo alukho nge-IMEI, andibi kunjalo?
Phendula uLaura othandekayo
Molo, ndiwuvelisile umnqweno wam kwaye awufumani kugubungela i-3G, ngaba umntu othile angandinikeza isisombululo? Ndiyabulela kakhulu.
INDLELA ONGAYIKHULULELA NGAYO
Ndizamile nge-HTC HTC Desire yam kwaye yavulwa kwitrayi yesibini. Andilahlekelwanga nge-3G, kwaye okwangoku zonke iinkqubo zam ziyasebenza, siza kubona kwiintsuku ezimbalwa ukuba yonke into ihamba njani.
INDLELA ENDISENZE NGAYO:
Ukusukela ngeWindows 7 andikwazi ukuqhuba isicelo, ndiye ndalanda umfanekiso we-ISO, ndaya kumatshini wam obonakalayo (i-VirtualBox), ndayiqhuba ndaza ndathi mandidibanise ifowuni, ndiyenzile, cofa iqhosha ... kwaye akukho nto, ndicinga ukuba kuya kufuneka ndiqale kwakhona i-terminal kodwa ayizange, ke ndiyikhuphe, ndaphinda ndazama, kwaye ngeli xesha iyasebenza. Ndivile ngabantu ekunyanzelekileyo ukuba bazame ukuya kuthi ga kathandathu okanye kasixhenxe, ke yima isibindi.
Ivenkile yeJl sitsho
ayisebenzi kwi-htc yeminqweno ye-hd, isebenza kuphela kumnqweno kunye nemvakalelo ... 🙁
Phendula iJl Electronicstore
kodwa inkqubo kufuneka yenziwe nge-sim kunye ne-sd ifakwe okanye ngaphandle kwazo zombini?
ngeSIM eyahlukileyo kunaleyo yesivumelwano? Ndithetha ukuba ifowuni iorenji kwaye ufuna ukutshintshela kwipepephone kuya kufuneka ufake ipepephone?
wazi njani i-hbot kunye nerediyo?
Molo, bendifuna ukuphawula ukuba ndirekhode umfanekiso kwintonga ye-USB ngoncedo lwe-Unetbootin; Ndiqale iPC kwi-USB, kwaye nangona indinike impazamo, ndayikhupha ifowuni okokuqala. Ndizamile ukufaka i-SIM khadi kwimeko nje kwaye kuvela ukuba yonke into igqibelele.
UNGANCEDA X NDITUMELE X I-IMEYILE IPROGRAM UKUKHULULELA. I-HTC DESIRE XK NDIZAMILE UKUKHUTSHWA KWAYO KUNYE I-LINK ASISAYIKUFUMANEKA KUNYE NGOKUPHELELEYO UKUYIKHULULELA KUSEBENZE NGOKUBANZI KAKHULU PELISCAFO1@HOTMAIL.COM
Molo NDINGATHANDA UKWAZI X NDICELA UKUBA UNGANDITUMELA LE NKQUBO KUM E-MAIL XK NAMHLANJE ESI SIQhagamshelo SESIPHELELE KWINKONZO KUNYE NAMACOMO ATHI IYASEBENZA NJENGOKO NDIBULELA PELISCAFO@1HOTMAIL.COM I HOPE K UNGAKHATHAZI BUYE NDIYABULELA
URegina Moretto sitsho
Ndingalungisa njani ukuba ndine-HBOOT 0.93.1000 kunye nerediyo eyi-5.14.05.1?
Phendula uRegina Moretto
Yhoo! Ndingathanda kakhulu ukuba nenkqubo umntu angayithumela kum eske kwiphepha le-xda alisekho, eskerrik asko !!! Enkosi kakhulu (ps: ingoma yokukhululeka nguBerri Txarrak kwividiyo intle kakhulu!) Imeyile yam: goiku1985@hotmail.com kunye eskerrik asko kwakhona
Uvavanywe nge-hboot 0.93.0001 kunye nerediyo 5.11.05.27. Kuvulwe ixesha lokuqala 😉
Isebenza neHboot 6 93 1002 kunye nerediyo 5 11 05 14
Ndiyihlaziya njani irediyo
Ndingayivula njani i-HTC Desire C ene-HBOOT-1.31.000 kunye neRADIO-1.10.98.15 kwaye umboneleli uvela eClaro-Peru?